၁၉၇၃ ခုနှစ်က ဂိုလ်ဒါ မယ်ယာအား တွေ့ရစဉ်
၄ ဦးမြောက် အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်
မတ် ၁၇၊ ၁၉၆၉ – ဇွန် ၃၊ ၁၉၇၄
ယီဂဲလ် အယ်လွန် (ခေတ္တ)
ဇူလိုင် ၁၆၊ ၁၉၇၀ – စက်တင်ဘာ ၁၊ ၁၉၇၀
ဇွန် ၁၈၊ ၁၉၅၆ – ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၁၉၆၆
မတ် ၁၀၊ ၁၉၄၉ – ဇွန် ၁၉၊ ၁၉၅၆
၁၉၄၈ – မတ် ၁၀၊ ၁၉၄၉
(1898-05-03)မေ ၃၊ ၁၈၉၈
ကီးယက်မြို့၊ ရုရှားအင်ပါယာ (ယနေ့ခေတ် ယူကရိန်းနိုင်ငံ)
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၁၉၇၈(1978-12-08) (အသက် ၈၀)
Mapai (၁၉၆၈ မတိုင်မီ)
Labor Party (၁၉၆၈–၁၉၇၈)
Morris Meyerson (m. ၁၉၁၇;d၁၉၅၁)
ဂိုလ်ဒါ မယ်ယာ[nb ၁] (born ဂိုလ်ဒါ မာဘိုဗစ်ချ်; မေ ၃ ၁၈၉၈ – ဒီဇင်ဘာ ၈ ၁၉၇၈) ဆိုသည့်အမျိုးသမီးမှာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံ သမိုင်းတစ်လျှောက် တတိယမြောက်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချူပ်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သုံးယောက်မြောက် အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် လည်း ဖြစ်သည်။ ဂိုလ်ဒါမယ် ယာ(Golda Meir) (ခေါ်)ဂိုလ်ဒါ မာဘို ဗစ်ချ်တပ် ကို ယခင်ရုရှားအင်ပါယာနောင်တွင် (ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု)၏ ယူကရိန်းပြည်နယ်(ယနေ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံ) မြို့တော် ကိ့ဖ်(Kiev )တွင် ဖခင် လက်သမားဆရာ မိုရှီ မာဘို ဗစ်ချ်တပ် နှင့်မိခင် ကုန်ခြောက်သည် ဘူလမီး နိမ့် ဒစ်ချ် တို့မှ ၁၈၉၈၊မေလ၊၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင် ၈ယောက် အနက် ၅ ဦး မှာ ငယ်စဉ်ကပင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ရှေးနာနှင့် ဆစ်ခီ့ ဆိုသော ညီအမနှစ်ဦးရှိသည်။ ရုရှား အင်ပါယာ အတွင်းလူမျိုးရေး ခွဲခြား မှုများ ကို စိတ်နာ သောကြောင့် ၁၉၀၃ ခုနှစ် တွင်ဖခင် မိုရှီ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သို့အလုပ် ရှာရန် ထွက်ခွာ သွားခဲ့တယ်။ ၁၉၀၆ခုနှစ်တွင်တမိသားစုလုံး ဖခင်နေထိုင်ရာ အမေရိကန် သို့ပြောင်း ရွေခဲ့သည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လော့ ဘဲလ်ဖို့က ပါလက်စတိုင်းဒေသ တွင် ဂျူးလူမျိုး များ၏ အခွင့်အရေး ကို စောင့်ရှောက် မည် ဟုကြေညာခဲ့သောကြောင့်လည်းကောင်း၊၁၉၂၁ခုနှစ်တွင် ပါလက်စတိုင်း ဒေသရှိ အာရပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သော ဟတ်ချ် အာမင် အာလ်း ဟူစိန်ဏီ (Hadj Amin EI Husseini)က ဂျူးလူမျိုးများအား တိုက်ခိုက်ရန် တပ်လှန့်လိုက်သဖြင့် လည်းကောင်း သွေးထွက်သံယိုမှုများပိုမိုများပြား ခဲ့ပါ တယ်။
၁၉၂၄ ခုနှစ် တွင် ဂိုလ်ဒါ သည် ကိုယ်ဝန်နေ့စေ့လစေ့ကြီးနှင့်ပင် ဂျေရုစလင် ( Jerusalem ) မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့လာရာ သားဖြစ် သူ မန်နာခမ်း ( Menachem ) ကို တဲလ်အဗစ်(Tel Aviv- ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင် ဂျူးခေါင်းဆောင်များ စတင်ထူထောင်သောမြို့၊ စမ်းရေ တောင်ကုန်းဟုအနက်ရှိသည်။) မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ တဲလ်အဗစ်မြို့တွင်ခဏသာနေထိုင်ကာဂျေရုဆလင်သို့ ပြောင်းရွေ့ပြန်သည်။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် သမီး ဖြစ်သူ ဆာရာ(Sarah)ကို ဂျေရုစလင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဂျူးအမျိုးသမီးအလုပ်သမားကောင်စီတွင်အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် အရွေး ခံရ ပါပြီး ထိုနှစ်တွင်ပင် အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲမှုကြောင့် ကလေး နှစ်ယောက်နှင့်အတူ တဲလ်အဗစ်မြို့သို့ ပြန်လည် ပြောင်းရွေ့နေထိုင် သည်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေး လွတ်လပ်ရေး သမိုင်းတွင် အရေး ပါသော ယခုလေဘာပါတီဖြစ်လာမည့် ဟီဗရူးဘာသာစကား ဖြင့် မေပိုင်(MAPAI – Mifleget Poalei Eretz Israel ) ခေါ် လေဘာပါတီ ( The Labor Party of the Land of Israel ) ကို ဒေးဗစ် ဘင်ဂူရီယန် ၊ အိဇက် ဘင်ဇဗီ တို့နှင့်အတူ ဂိုလ်ဒါ မယ်ယာ တစ်ယောက် ပါတီ ကို စတင် တည်ထောင် သော အဓိက လူ စာရင်း တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ၁၉၁၇၊နိုဝင်ဘာ၊၂ ရက် နေ့တွင် ဗြိတိန်အစိုးရက ပါလက်စတိုင်းဒေသရှိ ဂျူး လူမျိုး များ၏နေထိုင် ခွင့်၊ ပြောင်းရွေ့ အခြေ ချမှု နှင့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးတို့ပါမကျန် နစ်နာမှုမရှိ စေရန်ကာကွယ်မည် ဟု ဘဲလ်ဖိုး ကြေညာချက် ( Belfour Declaration )ကို ကြေညာထုတ် ပြန် ခဲ့တယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ သမိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များ သည် ၁၉၃၂တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သို့ ဂျူးအမျိုးသမီးအလုပ်သမားကောင်စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာသော ဂိုလ်ဒါ မယ်ရာ အားအရည် အချင်းမည်မျှ ရှိကြောင်း စစ်ဆေးရန် ကြိုဆိုကြပါတော့သည်။
၁၉၃၄ ခုနှစ် အတွင်း ဂိုလ်ဒါ သည် ဂျူးအမျိုးသမီးများ အလုပ်သမားကောင်စီ၏ နိုင်ငံရေးဌာန တွင်အကြီးအကဲအဖြစ် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရ ပါတယ်။ ထိုရွေးချယ်မှုသည် နောင်တစ်ချိန်တွင်နိုင်ငံ့အကြီးအကဲဖြစ်စေရန် ပထမဆုံးလမ်းစ ပင်ဖြစ်သည်။၁၉၃၇၊ ဩဂုတ်တွင် ဗြိတိန်အစိုးရ၏ ပီးလ် ကော်မရှင် ( Peel Commission ) က ဂျူးနိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရန် နယ်မြေအနည်းငယ်ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ဂျူးလူမျိုးများ၏မညီညွတ်မှုများ၊ အာရပ်တို့၏ ပုန်ကန်မှုများ၊ ဗြိတိန်အထက်လွှတ်တော် ရှိ ကွန်ဆာ ဗေးတစ် ပါတီအမတ် များ ကြောင့် ၁၉၃၈ တွင် ပီးလ် စီမံကိန်း ကျဆုံးသွား ခဲ့တယ်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ် သော ‘အီဗန် လေ ဘိန်း ‘( Evian – les – Bains ) ညီလာခံ သို့ ဂိုလ်ဒါ က ဂျူး ဒုက္ခသည် ပြဿ နာ ကို တင်ပြ ခဲ့သော်လည်း အနိုပ်စက်၊အနိုင်ကျင့်ခံ ဥရောပရှိ ဂျူး အရေး မှာ ပိုမို ဆိုးဝါး ခဲ့သည်။ ထို ၁၉၃၈ ခုနှစ် တွင် ဗြိတိန်အစိုးရ ကပါလက်စတိုင်း ဒေသ အတွင်း သို့ ပြောင်းရွေ့ ဝင်ရောက် လာသော ဂျူး လူမျိုးများအား တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပြန်သည်။ ဗြိတိန်အစိုးရ၏တားဆီးမှုများကို အံတုစိန်ခေါ်ပြီး ပါလက်စတိုင်းဒေသအတွင်းသို့ ဂျူး လူမျိုး များ ခိုးဝင် ရောက်ရှိ ရေး လှုပ်ရှား မှုများတွင်လည်း ဂိုလ်ဒါ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သေးသည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး မစတင်ခင် အချိန်လေးတွင် ဂိုလ်ဒါ သည်ဗြိတိန် အစိုးရ ၏ ၏ မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာထားသော‘ ဟာဂါနာ ‘ ( Haganah )ခေါ် မြေအောက် ဂျူးတပ်မတော်၏ အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့တွင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၄၀ တွင်ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ မော့ရစ်စ် နဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းသင်းခဲ့သော်လည်း ဂိုလ်ဒါသည် သူမ၏အလုပ်တွင်သာ အာရုံစူးစိုက်လွန်းခြင်းကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာကာ လမ်းခွဲခဲ့ရသော်လည်း တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကား မရှိခဲ့ပေ။ မောရစ်မိုင်ယာဆန် သည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ကြောင်း ကြေညာစာတမ်းတွင် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သော ဂျူးခေါင်းဆောင် ၂၄ ဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပေါ်ပေါက်စ အစ္စရေးနိုင်ငံကို ပတ်ဝန်းကျင် အာရပ်နိုင်ငံများက ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စစ်လက်နက်များဝယ်ယူရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည်တဝှန်း လှည့်လည်အလှူခံ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခဲ့သည်။ အစ္စရေးခေါင်းဆောင်များက အများဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ သန်းခန့်သာရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြ သော်လည်း သန်း ၅၀ ကျော် စုဆောင်းပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် အစ္စရေးနိုင်ငံကို အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အလှူခံရရှိငွေများဖြင့် ထူထောင်ခဲ့ ရသည်ဟု နောင်လာနောက်သားတို့က ပြောစမှတ်ပြုရလိမ့်မည်ဟု အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂူရီရန်က အသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
↑ /ˌɡoʊldə meɪˈɪər/ gohl-DƏ-_-MAY-eer; ဟီဘရူး: גּוֹלְדָּה מֵאִיר‎, pronounced [ɡolˈda meˈ(ʔ)iʁ, ˈɡolda -]; အာရပ်: جولدا مائير‎, romanized: Jūldā Māʾīr.
↑ Meir။ HarperCollins။
↑ Meir, Golda။ Oxford Dictionaries။ Oxford University Press။
↑ Meir။ Merriam-Webster Dictionary။ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Golda Meir: An Outline ofaUnique Life: A Chronological Survey of Gola Meir's Life and Legacy။ The Golda Meir Center for Political Leadership (Metropolitan State University of Denver)။ Reference on name pronunciation (see "1956").
အယ်လွန် (ခေတ္တ၊ ၁၉၆၉)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုလ်ဒါ_မယ်ယာ&oldid=703544" မှ ရယူရန်